Raw Bromelain powder hplc = 98% | KUDZIDZWA KUTA KUDZIDZA PUPI
/ Products / Plant Plant Extract / Bromelain upfu
Rating: Category: Plant Plant Extract
ICHINYANYA ndechekugadzirisa uye kugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika kuhutano hweBromelain powder, pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Bromelain iyo ipuroteni yakabudiswa yakabva kumatemu epapineapples, kunyange zvazvo iripo mumativi ose emuchero uye michero. Iko kunotora kune nhoroondo yevanhu vekushandisa mushonga. Sezvokudya zvinoshandiswa, zvinogona kushandiswa se-tenderizer yemhuka, mumhando dzakasiyana-siyana dzemishonga nekutsvakurudza mhando dzehutano hwakakwanisa kurwisa zvirwere.
Bromelain upfu vhidhiyo
Raw Bromelain powder zvinhu Characters
Name: Bromelain powder
Kushandiswa kwehupfu hweBromelain
Bromelain Raw powder Mazita
Bromelain anozivikanwawo seInanimine enzymes, pineapple enzymes.
Hapana akajekesa kukurudzira dhigirii.
Warning on Bromelain powdered raw
Bromelain haisati yasimbiswa nesayenzi kuti inoshanda pakurapa dzimwe zvirwere uye haina kubvumirwa neU.S. Food and Drug Administration kuti irapwe chero chirwere chipi zvacho. MuUnited States, nharaunda yeDetary Supplement Health and Education Act (DSHEA, 1994) inobvumira kutengesa kwebromelain-ine zvokudya zvekudyisa kunyange zvazvo kushanda kusina kusimbiswa.
Raw Bromelain powder Zvimwe mirayiridzo
Pamwe pamwe nepapain, bromelain ndeimwe yezvinyorwa zvakakurumbira zvinoshandiswa pakugadzira nyama. Bromelain inotengeswa nemafuta, iyo inosanganiswa ne marinade, kana yakasanganiswa zvakananga panyama isina kudya.
Nzira yekutenga Bromelain poda kubva kuAASraw